Orogoay : Fanontaniana ho an’ny vohikala mpizara rakikira sy sary iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2008 2:05 GMT
Soratry ny tonia: Ity lahasoratra manaraka ity dia nadika avy tamin’ny fampiresahan’ny mpamaham-bolongana Orogoaiana, Martin Balao. Ilay mpamaham-bolongana manana ny anaram-bositra hoe E1000 izay iray amin’ny Olobe ao anatin’ny fikambanana Fotos de Uruguay [es] (Sarin’I Orogoay) no noresadresahany tamin’izany, fikambanana niainga tamin’ny fifampizarana sary tamina vohikala izay efa ahafahana itrohana ny hiran’ny artista Orogoaiana ankehitriny. Azonao jerena ao amin’ny rohin’ny Martin's blog ny lahatsoratra loharano nadika .
1. Oviana, tamin’ny fomba manao ahoana ary nahoana no natsagana ny Sarin’I Orogoay?
Rehefa nankany Espaina aho dia nalahelo ny tanindrazako tahaka ny mpifindra monina maro hafa ihany. Rehefa tratran’izany (alahelo izany) moa ianao ny zavatra tianao hatao voalohany indrindra dia ny hisintona ny tanindrazanao. Tianao ny handre, ny hikasika, ny hahita na ny hahazo ny fofompofon’ny avy any an-tanindrazanao. Diso fanantenana tanteraka aho rehefa mba nitady zavatra tamin’ny aterineto. Tsy nisy na inona na inona nikasika an’i Orogoay mihitsy taa tamin’ny 2003 ka nahatonga ahy hanapa-kevitra hanao azy. Tsy mbola nahalala na dia kely variraiventy ny amin’ny fananganana ny vohikala akory aho ary tsy mbola nalaza tahaka ny ankehitriny ny bolongana tamin’izany fotoana izany. Niainga tamin'ny HTML bitika indrindra aho ary namorona ny takelako voalohany. Pejy iray ihany tamin’izany fotoana izany, hitako avy eo ny fampahalalana ny fametrahana rakitsary ary dia teraka nanomboka hatreo ny Uruguay Photos (sarin’i Orogoay). Nikambana tamina seraseramailaka maro aho ka niangavy tamin'ny rehetra mba handefa sary. Azoko ny sary (ary nasehoko) fa vitsy ny nitsidika (ilay vohikala). Teo no fantatro fa mila misakaiza amin’ny Google aho, saingy teny no tian’i Google fa tsy sary. Nitsidika ny PHPNUKE aho, vohikala ahitana zava-mahaliana hafa ankoatra ny sary. Nanomboka nanangona ny rohin’ny gazety sy ny fampielezam-peo mandeha amin’ny aterineto aho, ary niatomboka ihany koa ny famoahana mozika rehefa nahalala mpifindra monina hafa aho. Mbola tsy nisy ny Rapidshare, Megaupload sy ny hafa hametrahana ny angonasa (tahiry azo zaraina). Nametraka fihazonana ho an’i Bit Torrent aho ka nanomboka nanana angonasa 1000 izaho sy Miriam noho i Bit Torrent sy eMule, ary dia niatomboka ihany koa ny fahazoamitroka mivantana (downloads).
2. Inona no dikan’ilay anarana ary naninona no anaram-pihaviana Argentina no nalaina?
Noho ny nanombohany tamin’ny alalan’ny famoahana rakitsary aloha no nahatonga ny anarany, ary ny anaram-pihaviana .ar indray dia noho io anaram-pihaviana io azo alaina maimaim-poana. Lafo ny fahazoana anaram-pihaviana Orogoaiana. Manana famaritam-pihaviana .tk koa izahay fa be loatra ny dokambarotra sy ny (tosatsary) popups avy ao.
3. Azonao lazaina anay ve ny endrikendriky ny fahavitrihan’ny vohikala? (mpitsidika sy ny isany ary ny hafatra sy ny fanehoankevitra)?
Izany hoe mihoatra ny 5 000 ny isan’ny mpitsidika isan’andro, indraindray dia mihoatra ny 20,000 ny fitambaran’isan-takelaka voatsidika isan’andro, nefea dia vitsy dia vitsy ny isan’ny fanehoan-kevitra. Taloha, raha nametraka ny fahazoana mitroka (hira) izahay dia maro no misintona (mitroka hira) ary dia mandao ny vohikala avy eo. Ankehitriny vao mba maresadresaka kely ny sehatry ny dinika.
4. Inona avy ny fitaovana ilaina sy ny saram-pandaniana hikolokoloana ny vohikala? Ahoana ny ifanarahanareo amin’ny mpanohana (ara-bola)?
Tsy fantatro aloha ny amin’ny fitaovana, fa mila solosaina roa mifandray amin’ny aterineto kosa ianao mandritra ny andro ho fikarakarana, fitrohana (hira…) sy ny zavatra hafa. Noraisin’i Mirian ho andraikitra kosa ny saram-pandaniana amin’ny serveur, izay ialan’ny vola avy any ampaosiny. Mila adiresy tena tsara kalitao kosa izahay saingy noho ny tsy fananana kara-pananambola (carte de crédit) dia tsy afa-mandoa vola ho amin’izany. Be ny olana mianjady amin’i Orogoay amin’ny resaka fandoavam-bola ampitain-davitra. Tsy misy banky mahavaha olana momba ny fandoavam-bola ho an’ny sampan-draharaha ivelan’ny firenena manko, ka mba hoe tsy mandoa vola fanampiny mihoatra izay tokony ho tena aloa amina saran-draharaha iray.
5. Nanao ahoana ny traikefanareo tamin’ny fampiasana ny PHP-Nuke?
Tsara ny Nuke ka. Manampy izay tsy mahay na inona na inona izy. Ha ha. Sarotra ny mifidy CMS (Content Management System na fomba fandrindrana ny votoaty), samy manana ny karohiny ny tsirairay, saingy tsy misy kosa ny manana izay tadiavinao.
6. Iza avy no mandrafitra ny ekipa ary ahoana ny hifampizaranareo ny asa?
I Mirian no mandrafitra ny ekipa. Ifampizaran’i Mirian sy i Mirian ny raharaha. Ha ha. Tsy hanome anarana aho re no tena marina satria betsaka izy ireo no azonao jerena ao amin’ny Sarin’i Orogoay, tahaka ny mpandrindra, ny (mpametraka sary) sy ny hafa ihany koa. Sehatra fifandrimbonan’asa ny vohikala ka izay te-handray anjara fampiroboroboana dia afaka manao azy araka ny fahaizany azy. Ny miasa mandritra ny 8 ka hatramin’ny 12 ora isan’andro kosa dia i Mirian.
7. Inona avy ny fanamby nampanantenainareo ny mpitsidika?
Zavamanahirana ny mifandray amin’ny mpitsidika/mpampiasa (ny vohikala). Sarotra ny mampifaly olona 35,000. Mahazo hafatra aho isan’andro manontany ahy ny fomba hitantanana ny vohikala. Sahala amin’ny baolina fandaka io e, samy manana ny fomba fandaharany mpilalao.
8. Efa nahazoanareo olana ve ny fiompanana amin’ny zon’ny mpamorona (copyright)?
Efa niresaka tamina mpanakanto ve ianao? Ahoana ny eritreritrao momba an’io? Efa nanatona anay indray mandeha ny Cudisco niangavy ny hanalanay ny fahafaha-misintona (mitroka) hira nalaina tamin’i DSUS4 (tarika Orogoayana) na zavatra mitovitovy amin’io. Niangaviany hoesorina avokoa ny rakikirany rehetra dia notanterahinay izany. Tsy hamingana ny mpanakanto akory izahay no mieritreritra ihany koa aho fa tsy manao izany izahay. Tsy misy tena mahafantatra ny sandan’ny vola very isaky ny rakikira. Ary tsy misy mahafantatra ihany koa ny isan’ny artista hita eto amin’ny aterineto. Raha ilaina ny mandoa vola 300-400 pesos ahafaha-mihaino rakikira iray dia tsy hiditra ho ao mihitsy aho raha 200 pesos isan’andro ny vola raisiko. Misy olana hafa ihany koa any Orogoay, tsy mba tongan’ny artista ny any anivontany. Miaina amina tanàna misy mponina 15 000 aho nefa dia tsy misy trano fivarotan-kapila ao. Misy mpandraharaha roa manana kapila mangirana 10-20 any ho any saingy mpanakanto iraisam-pirenena ireo. Tsy misy mahasahy mitondra rakikira vinyl kosa aty. Efa mifankazatra isan’andro amin’ny mpanakanto moa aho noho Ny Sarin’i Orogoay. Tsy mahatakatra anay ny fandefasam-peo maro any Montevideo na tsy misy mihaino. Indray maka nisy mpanakanto iray niteny hoe raha tsy voarakitra ao amin’ny aterineto ny rakikirako dia ratsy izy izay (na) tsy fantatro. Manontany tena aho hoe raha esorina moa ny fahafaha-misintona hira, hanjavona ve ny fampidirantongotra manontolo anaty kiraro (izany hoe araka ny fahazoan’ny mpandika teny azy dia hoe hanafoana ny fanao efa mahazatra ve izany na hoe fangalarana hahazo maimai-poana? Mila ny hevitry ny mpahay teny anglisy aho eto)? Aoka hazava: iray ihany no niangavy ny hanalana ny rakikirany, ary ny 12-15 hafa kosa nangataka ny hametrahana ny hirany ao amin’ny vohikalanay. Pepe Guerra izao mizara ny rakikirany ao amin’ny vohikalany, fampidirantongotra manontolo anaty kiraro ataon’ny tenany ihany ve izany? Nozaraina ny rakikira ao amin’ny Sarin’i Orogoay ka misy ny taranaka vaovao mety ho tsy naheno ireo rakikira ireo velively. Efa nisy mpanao mozika telo malaza aloha nilaza fankasitrahana ny nataonay e! ary mihamaro ny mozisiana no mpitsidika an’i Sarin’i Orogoay.
9. Inona ny fikasanareo ho amin’ny ho avy?
Toy ny mampitonatonana ny mametraka drafitra anatina tontolo mora miova sy tsy mitsahatra ny mivoatra. Tamin’ny fotoana nanombohan’ny fisintonana (fitrohana hira) mivantana dia noheverina ho tahaka ny ho tsotsotra avokoa ny zavatra rehetra. Saingy nisy boay anankiray izay nitondra rakikira 300 sa 400 avy hatrany indray maka, ka io toe-javatra io no nanova tanteraka ny teti-panorona rehetra.
10. Misy zavatra hafa azonao ambara ve?
Fampirisihana fotsiny ihany ity tetikasa ity. Tsy natao hitadiavana tombombarotra izy ka nanjary tsy nahaliana, nandreraka, nahasorena izany ny nanao azy saingy ho fanehoanam-pankasitrahana ny namana Orogoaiana manerantany dia notohizanay ny famelomana azy.